हमास - विकिपिडिया
हमास (अरबी: حماس Ḥamās, an संक्षिप्त حركة المقاومة الاسلامية Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah ) प्यालेस्टाइनको सुन्नी-इस्लामिक कट्टरपन्थी सङ्घठन हो । योसँग यसको समाज सेवा बिभाग दवाह र सैन्य बिभाग इज दिन अल कास्सम ब्रिगेड रहेको छ। यो गाजा पट्टीलाई २००७ मा कब्जा गरे देखि त्यस क्षेत्रको अघोषित शासकीय निकाय रहेको छ । यो अबधिमा यसले इजरायलसँग धेरै युद्ध लड्यो । यो सङ्घठनलाई कयौं राष्ट्र तथा अन्तरास्ट्रिय सङ्गठनले ,मुख्यतः इजरायल ,संयुक्त राज्य अमेरिका,र युरोपेली सङ्घ, पूर्ण वा आंशिक आतंकबादी सङ्गठन मान्छ । रूस , चीन र टर्की यो नमान्ने केहि देशहरू हुन् ।
मौसा अबु मार्जुकMatthew Levitt,
प्यालेस्टिनी मुस्लिम ब्रदरहुड
७४ / १३२
हमासको स्थापना इजेप्टेली सङ्गठन मुस्लिम ब्रदरहूडको शाखाको रूपमा १९८७ मा भएको थियो । यो सुरु देखि नै इजरायल प्रति शत्रुतापूर्ण , प्रतिरोधी र प्यालेस्टिनी मुक्ति सङ्गठन पि.एल.ओ. बिरोधि रहेको थियो । सह-संथापक शेख अहमद यासिनको भनाइ १९८७ अनुसार र हमासको बडापत्र १९८८ को अनुसार हमासको स्थापना इजरायली अधिनस्थबाट प्यालेस्टाइनको मुक्ति र हालको इजरायल, पश्चिमी तट र गाजा पट्टीमा इस्लामिक राज्यको निर्माणको लागि भएको थियो ।
हमासको सैन्य बिभागले आफ्ना उच्च नेताको हत्याको बदला लिनको लागि इजरायली नागरिक र सैनिकमाथि आक्रमण शृङ्खला चलाएको थियो । यसको रणनीतिमा आत्मघाती बम बिस्फोट र , २००१ देखि रकेट आक्रमणहरु समावेश छन् । हमासको रकेट शस्त्रशालामा विशेषगरि छोटो दुरीको रकेटहरु छन् र लामो दुरीको रकेट पनि रहेका छन् जुन मुख्य इजरायली शहर तेल अबिब र हैफालाई निसाना बनाउन सक्छ । नागरिक माथि गरिएका आक्रमणलाई मानव अधिकार समुह जस्तै ह्युमन राइट वाचले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा लिने गरेको छ । २०१७ मा प्यालेस्टिनी भूभागमा गरिएको गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार हमासको हिंसा अलोकप्रिय छ । नागरिक माथि गरिएका आक्रमणलाई मानव अधिकार समुह जस्तै ह्युमन राइट वाचले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको रूपमा लिने गरेको छ ।
२००६ को जनवरीमा भएको प्यालेस्टिनी संसदीय निर्वाचनमा, हमासले प्यालेस्टिनी संसदमा पि.एल.ओ सम्बद्ध फताह पार्टीलाई पराजित गर्दै बहुमत हासिल गर्यो । उक्त निर्वाचन पछि , चौकडी ( अमेरिका , रसिया , संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र युरोपेली सङ्घ ) ले अहिंसा, इजरायललाई मान्यता दिने र पुर्व सम्झौताको पालाना गर्ने भावी सरकारको प्रतिबद्धता सर्तमा वैदेशिक सहायता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हमासले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरे पछि चौकडीले वैदेशिक सहायता बन्द गर्यो र इजरायलले हमास नेतृत्वको प्रशासन माथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो । २००७ मार्च मा , हमासको प्रधानमन्त्री इस्माइल हनियेह नेतृत्वको राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्यो , तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन असफल रह्यो । प्यालेस्टिनी सुरक्षा बलको नियन्त्रणको बिषयलाई लिएर तनाब उत्पन भयो र २००७ मा गाजाको लडाई भयो । त्यसपछि गाजाको नियन्त्रण हमासको हातमा आयो । इजरायल र इजिप्टले त्यसपछि गाजापट्टीमा आर्थिक नाकाबन्दी गरे ।  २०११ मा, हमास र फताहले गठबन्धन गर्ने सम्झौता गरे र त्योबाट संयुक्त कामचलाउ प्यालेस्टिनी सरकार गठन भयो ।
हमास ( अरबी भाषा حركة المقاومة الاسلامية or Harakat al-Muqāwama al-Islāmiyya,) को आर्थ "इस्लामिक प्रतिरोधी आन्दोलन" हुन्छ . अरबिक शब्द "हमास" (حماس) को अर्थ " साहस" हुन्छ । 
↑ "गाजा सङ्घर्ष: इजरायल र प्यालेस्टिनियनहरू युद्ध केही हप्ताका लागि रोक्न सहमत भएका छन्", द गार्जियन, अन्तिम पहुँच १० नोभेम्बर २०१४।
↑ रमानि, सामुएल (२६ जुलाई २०१६), "किन प्यालेस्टाइनले दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई समर्थन गर्यो", द डिप्लोम्याट, अन्तिम पहुँच ४ सेप्टेम्बर २०१८।
↑ "युरोपेली सङ्गठनले हमासलमई आतंकवादी सूचीमा राखेको छ", युराएक्टिभ, २७ मार्च २०१५, अन्तिम पहुँच १५ जुन २०१५।
↑ "आतंकवादमा देशको प्रतिवेदन", स्टेट डट जिआेभी, अप्रिल २००६।
↑ फिसर, म्याक्स (२१ नोभेम्बर २०१२), "इजरायल-गाजाको बारेमा तपाईँहरूले सोध्ने ९ प्रश्न", अन्तिम पहुँच जनवरी ६, २०१८।
↑ "गाजाबाट हमासको रकेटहरू, लक्ष्य हाइफा उत्तरी इजरायलमा पुगेका छन्", वासिङ्टन फ्रि बोकन, अन्तिम पहुँच जुलाई १७, २०१५।
↑ "हामास को हुन्?", लन्डन: बिबिसी समाचार, २६ जनवरी २००६।
↑ "यदि नाकाबन्दी जारी रही रहयो भने गाजाले आर्थिक आपदाको सामना गर्न सक्छ", युएसए टुडे, एसोसिएटेड प्रेस, २९ मार्च २००९, अन्तिम पहुँच ९ अक्टोबर २०१३।
↑ मार्था क्रेनस, जोन पिम्लोट. आतङ्कवादको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकोश. २०१५ पृष्ठ ४१५
↑ जेनिफर जेफ्रिस. हमास: आतङ्कवाद, प्रशासन, र मध्य पूर्व राजनीतिमा यसको भविष्य. एबिसि-क्लियो. २०१६ पृष्ठ ११९.
↑ "इस्लामिक प्रतिरोध आन्दोलनको सम्झौता(हमास)", मिडल इस्ट वेब, १८ अगस्ट १९९८।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=हमास&oldid=919776" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १२ सेप्टेम्बर २०२०, २३:२६
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २३:२६, १२ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।